Serivisy fanariana maty - Anebon Metal Products Co., Ltd.
Manomboka amin'ny famolavolana voalohany ka hatramin'ny fivorian'ny vokatra, ny tranokala famokarana Anebon dia afaka manome traikefa tokana an'ny mpanjifa. Mpiasa iray matihanina sy mahay be, ahitana injeniera sy manam-pahaizana momba ny kalitao kalitao izay afaka manamboatra ny fizotry ny famokarana isan-karazany mifanaraka amin'ny ilain'ny mpanjifa manokana. ny fitaovana ilaina hamokarana azy, manomboka amin'ny fandrendrehana ka hatramin'ny dingana famaranana toy ny milina, fanodinam-bolo, fikororohana, fipetrahana, fasika, fandokoana ary fivoriambe）.
Ny famolavolana bobongolo dia iray amin'ny herinay. Raha manamafy ny volavola miaraka amin'ny mpanjifa izahay, dia dinihinay koa ny lafiny rehetra amin'ny famolavolana bobongolo, anisan'izany ny fomba hikorianan'ny metaly ao amin'ilay fitaovana, mba hamokarana ampahany sarotra amin'ny lafiny geometrika amin'ny endrika akaikin'ny vokatra farany.
Ny famoahana maty dia fizotran'ny fanariana vy izay miavaka amin'ny alàlan'ny lavaka bobongolo mba hampidirana tsindry ambony amin'ny vy anidina. Ny bobongolo dia mazàna ampiasaina amin'ny alika mahery, ary ny sasany amin'izy ireo dia mitovy amin'ny famolavolana tsindrona. Ny ankamaroan'ny fanariana maty dia tsy misy vy, toy ny zinc, varahina, aliminioma, manezioma, firamainty, firapotsy ary firaka vita amin'ny firaka ary firaka hafa. Miankina amin'ny karazana fanariana maty, ilaina ny milina famonoana efitrano mangatsiaka na ny milina famonoana efitrano mafana.
Ny fitaovana fanariana sy ny bobongolo dia lafo, koa ny fizotran'ny famoahana maty dia matetika ampiasaina mba hamokarana vokatra marobe. Mora ihany ny manamboatra ampahany maty paika, izay amin'ny ankapobeny dia dingana efatra ihany no tsy maintsy ampiana, ary kely ny fiakaran'ny vidiny. Ny casting casting dia mety indrindra amin'ny fananganana casting kely sy salantsalany marobe, noho izany ny casting casting no be mpampiasa indrindra amin'ny fomba fanariana maro samihafa. Raha ampitahaina amin'ny teknika fanariana hafa, ny maty maty dia manaloka kokoa ary misy tsy fitoviana lehibe kokoa.
Te hanao izay azonay atao izahay mba hiarovana ny tontolo iainana. Amin'ny maha orinasa mpamokatra antsika dia manana andraikitra manokana izahay hisorohana ny tontolo iainana amin'ny loto.
Tombony azo amin'ny casting casting
1.Ny famokarana casting dia avo dia avo, ary vitsy na tsy misy milina.
2.Ny fizarana fandavana dity dia mahatonga ny faritra haharitra, miorina tsara ary manasongadina ny kalitao sy ny bika aman'endriny.
Ny faritra 3.Die-cast dia matanjaka kokoa noho ny ampahany miorina amin'ny plastika izay manome ny refy mitovy amin'ny refy.
4.Ny bobongolo ampiasaina amin'ny fanariana maty dia mety hamokatra casting mitovy amin'ny an'arivony ao anatin'ny fandeferana voafaritra alohan'ny ilana fitaovana fanampiny.
5.Zinc castings dia azo alefa elektrika mora foana na vita amin'ny fitsaboana ambony kely.
6.Ny lavaka ao amin'ny fanariana maty dia azo ahodina ary hamboarina ho refy mifanaraka amin'ny fandavahana tena.
7. Ny kofehy ivelany amin'ny ampahany dia mety ho faty mora foana
8.Die casting dia afaka mamerina ny volavolan'ny fahasamihafana sy ny haavon'ny antsipiriany miverimberina.
9. Amin'ny ankapobeny, ny famoahana maty dia mampihena ny vidin'ny dingana iray raha oharina amin'ny dingana iray izay mila dingana famokarana maro samihafa. Izy io koa dia afaka mamonjy fandaniana amin'ny alàlan'ny fampihenana ny fako sy ny fako.
Ny metaly nampiasainay tamin'ny fanariana maty dia misy ny zinc, varahina, aliminioma, manezioma, firaka, firapotsy ary firaka vita amin'ny firaka sns, na dia tsy fahita firy aza ny vy, dia azo atao ihany koa. Ireto ny toetran'ny metaly isan-karazany mandritra ny fanariana maty:
• Zinc: Ny metaly mora maty indrindra, ara-toekarena rehefa manamboatra ampahany kely, mora palitao, tanjaka avo lenta, plastika avo lenta, ary fiainana maharitra.
• Aluminum: Fanamboarana avo lenta, fanamboarana sarotra ary fitetezana rindrina manify miaraka amin'ny fahamarinan-toerana avo lenta, fanoherana ny harafesina avo, fananana mekanika tsara, fitondra hafanana avo lenta sy fitondra mandeha amin'ny herinaratra ary tanjaka ambony amin'ny mari-pana ambony.
• magnésium: Mora ampiasaina amin'ny milina, tahan'ny tanjaka sy lanjany, ny maivana indrindra amin'ny metaly maty.
• Copper: Hamafin'ny hafanana sy fanoherana ny harafoana matanjaka. Ny metaly die-cast be mpampiasa indrindra dia manana kojakoja mekanika tsara indrindra, fanoherana akanjo ary tanjaka akaikin'ny vy.
• Lead sy tin: Haavo avo sy avo lenta ny refy ho an'ny faritra miaro amin'ny harafesina manokana. Noho ny antony ara-pahasalamam-bahoaka, ity alika ity dia tsy azo ampiasaina ho fanodinana sakafo sy toerana fitahirizana. Ny firaka firamainty-tin-bismuth (indraindray misy varahina kely koa) dia azo ampiasaina hanamboarana taratasy vita tanana sy fanaovana hajia mafana amin'ny fanontana pirinty.